Fanambarana - Tokony homena amin’ny fomba mangaraharaha ny fahazoan-dàlana momba ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara - TIA
Tokony homena amin’ny fomba mangaraharaha ny fahazoan-dàlana momba ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara
Hatramin’ny nanafoanan’ny governemanta malagasy ny fanomezan-dalana hitrandraka harena an-kibon’ny tany tamin’ny 2011, nanjary lasa tsy ara-drariny sy araky ny tokony izy intsony ny fomba fanomezana izany kamahabetsaka ny kolikoly sy mampihemotra ny mpampiasa vola.
Niroso tamin’ny fampiharana ny fandaharan’asa antsoina hoe « Accountable Mining »na « harena an-kibon’ny tany ao anatin’ny mangarahahara sy nytamberin’andraikitra” i Madagasikara tamin’ny taona 2018, mba hanantanteraka tombana ny amin’ny hisian’ny kolikoly ao amin’ny fomba fanomezan-dalana hitrandraka.
Firenena miisa 4 no manao toy izanykoa : Argentine, Mexique, Ghana ary Kyrgyzstan. Ny TI Australia moa no mandrindra ny fandaharan’asa izaymarihana fa natomboka tamin’ny fomba ofisialy tamin’ny volana martsa 2019. Ho fampiarahana ny fikarohana amin’ny asa mivaingana dia natolotra anio tao amin’ny trano fandraisam-bahiny Panorama Andrainarivo ny vokatry ny fikarohana-tombana ny amin’ny hisian’ny kolikoly eo amin’ny fombafanomezan-dàlana hitrandraka harena an- kibon’ny tany. Iriana ny hisian’ny asa iarahan’ny mpisehatrarehetra amin’ireo loza laharam-pahamehana.
Ny fanokafana ny fanomezan-dàlana momba ny harena an-kibon’ny tany
Ny fitaovana MACRA no nampiasaina tamin’ny fijerena ny antony mampisy kolikoly sy ny irika hidiran’ny kolikoly ka nafahafana manome fahazoan-dàlana tsy araky ny lalàna.
Ny fanararaotana ny fampiasana ilay naoty fampihatoana no isan’ny faharefoana hita fa maha be ny kolikoly.
Nivoaka tamin’ny alalan’ny fanadihadiana natao fa ny fanomezan- dàlana tamin’ny alalan’ilay naoty, izay midika tsy fanarahana ny antanan-tohatry ny làlana, no tena nahabetsaka ny kolikoly : fidiran’ny resaka politika sy fanomezam-bola be miafina ho takalon’ny fahazoan-dàlana. Ny fanafoanana ilay naoty navoakan’ny governemanta sy ny taratasy iraisan’ny ministera mampiato ny fanomezan-dàlana tsotra sy ho an’ny mpitrandraka madinika no maika indrindra ankehitriny.
Tamin’ny volana aogositra 2019, nilaza Andriamatoa Fidiniavo RAVOKATRA, ministra ankehitiny momba ny harena an-kibon’ny tany sy ny loharano stratejika fa nanam-pikasana izy hanome amin’ny fomba mangarahara fahazoan-dàlana hitrandraka miisa 50 (PE), fahazoan-dàlana hikaroka (PR) miisa 500 ary fahazoan-dalana natokana ho an’ny mpitrandraka madinika (PRE) miisa 500 hatramin’ny volana jona 2020. Tohanan’ny TI-MG tokoa ny hevitra milaza fa ny fanomezan-dàlana momba ny harena an-kibon’ny tany dia tokony ao anatin’ny fangaraharana tanteraka, mampihatra ny tamberinan’andraikitra ary mifototra amin’ny sivana tsy mitanila.
Tranga mampaharefo sy loza hita
Tranga mampaharefo 19 sy loza 24 momba ny kolikoly no navoakan’ny fikarohana nataon’ny TI-MG. Ny 2/3n’ireo “loza tena ambony” dia mifandray amin’ny tsy fanarahana ny làlana mifehy ny harena an-kibon’ny tany sy ny rafitra mifehy izany.
Ilay fomba fanomezan-dàlana mihitsy dia efa mahabe kolikoly, fa ao ihany koa ny zava-misy, ny tsy fisisan’ny fe-potoana mazava hanaovana sonia, ny tsy fisian’ny famerana ny fahefan’ny Ministra manao sonia, ny tsy fisian’ny fiarovana ireo mpanao fanairana ary ny fanararaotana ny fampiasana ilay naoty mampiato ny fanomezan-dalana.
Koa satria ny fahombiazana dia mifototra amin’ny fiaraha-miasa, vonona tanteraka ny TI-MG hiara-hiasa amin’ireo mpisehatra rehetra ao amin’ny tontolon’ny harena an-kibon’ny tany mba hampiharana ireo tolo-kevitra maro, ao anatin’izany ihany koa ny fandraisana anjara amin’ny fanavaozana ny Làlana mifehy ity sehatra ity izay efa andalam- pamolavolana ankehitriny. Ao anatin’ny fanajana hatrany ny teny baikon’ny fikambanana manao hoe : “Matanjaka kokoa isika rehefa miaraka miady amin’ny kolikoly”